नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका चर्चित गायक हुन् शिव परियार । उनले गाएको धेरै भन्दा धेरै गीतहरुमा अधिकांश गीतहरुले चर्चा पाउने गर्छन र दर्शक स्रोताको लागि प्रिय बन्ने गर्छन्। र उनको गीतहरुले प्राय अवार्ड पनि जितिरहेका हुन्छन्। यसैविच हालै म्युजिक खवरको अवार्डमा पनि उनको गीत नभेटि नभेटि बाट उत्कृष्ट गायकको नोमिनेशनमा परेका छन्। यसैविच आर्टिष्ट खवर संगको कुराकानीमा उनले आफ्नो गीत संगीत तथा अवार्डको बारेमा चर्चा गरेका छन्। आर्टिष्ट खवरसंगको शिवपरियारको कुराकानी यस्तो रहेको छ:
तपाई अवार्ड त थुप्रै पाइरहनु हुन्छ । नोमिनेशनमा पर्नु भएको छ कुनै नौलो कुरा लाग्दैन होला?
त्यस्तो होइन,अवार्डको अवमुल्यननै हुने गरी त हामीले अवार्ड पाएको छैनौं। खुसी लाग्छ।आफुले गरेको कामलाई एउटा सहि तरिकाले मुल्यांकन गर्दा खुसी लाग्छ। मान्छेको मन कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सक्दैन । अब अवार्ड नै पाउनु पर्छ भन्ने उदेश्यले हामीले काम गर्दैनौ। तर आफुले गरेको राम्रो काम लाइ अवार्ड मै नोमिनेशन हुँदा त्यस बाट काम गर्न हौसला मिलेको जस्तो हुन्छ्।
तपाईको कैयौं चर्चित गीत भएपनि वर्षमा एउटा गीतले मात्र अवार्ड पाएको हुन्छ, यसपटक कुन गीत बाट नोमिनेशनमा पर्नुभयो?
धेरै वर्ष पछि मैले माया प्रेमको गीत गाएको छु। आधुनिक कलेक्शन पनि दुई वर्ष देखि गाउनै छोडेको छु । मलाई चित्त बुझ्दो खालको शव्द संगीत नभएका कारण तथा आज भन्दा २० २५ वर्ष अघिकै शैलीका शव्द हरु र सिआरविटी युट्युवमा आउनकै लागि बनाइका शव्द भएका कारण त्यस्ता गीत गाउन छोडेको छु। र धेरै पछि लामो दुरीमा रहेका व्यक्तिको सम्बन्धको विषयमा हुने माया प्रेम को बारेमा आफ्नै संगीतमा नभेटी नभेटी गाएको हुँ। यो वर्ष गीत संगीत क्षेत्रमा हजारौं गीत आउँदा मेरो गीतले उत्कृष्ट पाँचमा पर्नुमा गीतको सम्पुर्ण टीमको काम सफल भएको महशुस हुन्छ।
वर्षमा कति गीत गाएको छु भन्ने याद हुन्छ?
यसपटक त मैले गीतनै गाएको छैन्। २०१५ मा गाएको गीत पिलायो साथीले ले अझैपनि छाप परिरहेको छ अझैपनि चर्चा पाइरहेको छ र २०१६ मा रेकर्ड गरेको गीत हो नभेटी नभेटी। र त्यसपछि भने एउटा अकाट्य अफर बाहेक अरु काम चाहिँ शव्द मन नपर्दा गीत रिजेक्ट गरेको छु। मैले शव्दले मन नछोएसम्म गीत नगाउने निर्णय गरेको छु।
पछिल्लोपटक तपाइको गीत कमै सुनिन्छ किन हो कि गीतहरु छान्न थाल्नु भएको हो?
छानेको पनि हो र म चाहिँ जनरालाई अलि फरक हिसावले देखाउन चाहन्छु। नयाँ प्रयोग गर्ने प्लानमा छु। सुरुमा गाउँदा पनि फरक तरिकाले नै गाएको थिए। अबको जनरालाई १० वर्ष अघिकै शैली नदिएर आधुनिक गीतमात्र नदिएर नविनतम गीत दिने सोचमा छु। र अहिलेका स्रोतालाई आजकै अत्याधुनिक शैलीमा अभ्यस्त गराएर नेपाली गीत गाउने सोचमा छु र निकट भविष्यमै तपाईले त्यो काम देख्न सक्नुहुनेछ।
पछिल्लो समय गायन प्रतिभाको लागि नेपाल आइडल एउटा ठाउँ बनेको छ कतिको हेर्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ?
म हेर्छु र राम्रो लाग्छ। म के सोच्छु भने नेपाल आइडललाई जजको आँखाले हेर्दिन्। जजका लागि आएका प्रस्ताव पनि इग्नोर गरिरहें। यसका प्रतिस्पर्धीलाई नेपालले पाएको अदभुत प्रतिभा हरु सम्मिलित हुनुहुन्छ। नयाँ जेनेरेशनमा कस्ता कस्ता प्रतिभाहरु आउँदैछन् भन्ने नेपाल आइडलले आंकलन दिन्छ। नेपाल आइलडमा यस्ले जित्ने यो खतरा यो मात्रै राम्रो भन्दा पनि टप १५ सम्म पर्न सक्ने प्रतिभाहरुलाई कलाकार हरुलाई मेरो शुभकामना छ। यो नेपाली संगीतमा उहाँहरु आउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। ठिकैका प्रतिभालाई पनि सुध्रिएर आउनुहोस भन्न चाहन्छु। पछिल्लो समय आइडल निकैनै कन्ट्रोभर्सी भइराछ तर पनि म चाहि यसलाई विवादको नजरले हेर्दिन्। तपाईलाइै जो मन पर्छ उसलाई भोट गर्नुस। भोट पाएर जित्दैमा सबै हुने होइन त्यसपछि फेरि ठुलो संघर्ष सुरु हुन्छ। अत उहाँहरुलाई नेपालमा अवसर एकदम कम छ र तपाईले एउटा प्लाटफर्म पाउनु भएको छ।र नेपालको गीत संगीत क्षेत्रका लागि लामो यात्रा बनाउन मेहनत गर्नुस मेरो सपोर्ट तपाईलाई छ भन्छु।
गीत गाएरै घर सम्म किन्नु भएको छ,आम्दानी को हिसावले गायकलाई नेपालमा कस्तो छ?
अहिले त आम्दानी राम्रो छ। एउटा कुरा के हो भने तपाईले नेपाली जनताको मन जित्नु सक्नुभयो भने नेपाली जनताले तपाईलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाई राजा बन्न सक्नुहुनेछ।
आम्दानीको बारेमा बताइदिनुस न?
पहिले चारआना कमाइन्थो चार आना खर्च हुन्थ्यो। अहिले एक रुपैया कमाइन्छ र त्यही रुपले खर्च हुन्छ। कमाइ अनुसारनै साथी संगत, उठबस, त्यही खालको सेलिब्रटीको स्टाटस मेन्टेन गर्नुपर्छ। संगीतमा लगानी गर्छु। सबै कमाइ गोजिमा राख्दैनौ। व्यक्तिगत रुपमा लगानी गरेर गीत् भिडियो ब्बनाउन्छुर । कुनै समय राम्रै कमाएको पनि छु। मेरो घरायसी खर्च पनि अलि बढि नै हुन्छ। ठगेर खाएको छैन। जिम्मेवार नागरिकको रुपमा कमाएर खाएको छु।
अन्तमा हामी अवार्ड नोमिनेशन कै कुरा गरौं, उत्कृष्ट पाँच मा पर्नु भएको छ, कस्तो लाग्छ?
२०१७ सम्म आइपुग्दा पाँचौंमा परेको छु। मलाई पाँच भनेकै एक हो जस्तो लाग्छ। हातको औला पनि पाँच हुन्छ। एउटै हातमा पांच औला हुन्छ र आफ्नै जस्तै लाग्छ। चार जना प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि उहाँहरुलाई नेपाली संगीतका योद्धा भन्न चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु। वर्षमा कैयौं गीत निस्किँदा उत्कृष्ट पांचमा पर्नु नै म आफुलाई भाग्यमानी ठान्छु।